Nasasho firfircoon: maxay tahay, maxay u tahay iyo faa'iidooyinka | Ragga Stylish
Xaqiiqdii waad maqashay in nasashada ay sidoo kale qayb ka tahay tababarka. Iyadoo wadarta nasashada ka kooban tahay joojinta waxqabadka gebi ahaanba, ka nasasho firfircoon waa kan nagu sii socodsiiya intaanu nasanayno. Nasashada firfircoon ayaa la xaqiijiyay inay tahay mid ka mid ah xulafada ugu fiican ee socodsiin kara isla markaana caafimaad qabta inta aynaan tababarka ku jirin. Markii aan jadwal u sameyno tababar, waxaan heli doonaa maalmo aan ku nasano jirka. Tani waa marka ay tahay inaan isticmaalno nasasho firfircoon.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa nasashada firfircoon tahay? Halkan waxaan ku sharaxeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato.
1 Waa maxay nasasho firfircoon
2 Ku naso shaqada xoogga
3 Faa'iidooyinka nasashada firfircoon
Waa maxay nasasho firfircoon
Markaan barnaamij u sameyno tababar, waa inaan ogaanno inay jiri doonaan maalmo tababar iyo maalmo nasasho. Daaran maalmaha nasashada waxaa muhiim ah in aan la tababbarin si aan looga badin. Qaladka ay dadka badankiisu galaan ayaa ah inay ka fikiraan in badan oo ay tababaraan, inbadan oo natiijooyin ah ay helayaan. Ma jiraan wax xaqiiqda ka fog. Waa in maskaxda lagu hayaa in jidhku u baahan yahay nasasho si uu awood ugu yeesho inuu ula qabsado tababbarka aan qabannay oo aan u horumarinno. Kuwan waxaa loo yaqaan is-waafajinta cayaaraha.
Si jidhku u wanaajiyo waxqabadkiisa iyo awooddiisa, waa inuu nasto. Haddii aan raacno tababarka nafaqada iyadoo loo eegayo ujeeddada aan raadineyno, waa marka aan ka faa'iideysan doonno dhammaan nafaqooyinkaas si aan u abuurno la qabsi. La qabsiga ka yimaada nidaamka neerfaha bilowga ilaa la qabsashada neerfaha iyo xusuusta. Tusaale ahaan, markaan sameyno nooc jimicsi ah markii ugu horreysay ee aan bilowno waxay dareemaan dareemo kala duwan oo jidhku wuxuu isku dayaa inuu la qabsado. Marka aan jimicsigaan dhowr jeer oo isku xigta sameyno, waxaan si qasab ah u sixi doonnaa dhammaan khaladaadkii aan galnay waqtigii hore. Sidan ayaad ku baranaysaa farsamooyinka kala duwan ee jimicsiga iskana ilaalin dhaawacyada.
Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in jirka la siiyo nasasho ku filan si uu ula jaanqaado xaaladaha una wanaajiyo. Xaqiiqdi waqtiyada soosocda ee aad sameyso nooc jimicsi ah waxaad yeelan doontaa awood balaaran oo aad kuhorumarin karto waxaadnaheli doontaa khibrad yar Si looga hortago jirku inuu soo galo xaalad nasasho, waxaan isku dayeynaa inaan xoogaa jimicsi jir ah ilaalino nasashada.
Ku naso shaqada xoogga
Aynu tusaalahan u qaadanno habka joogtada ah ee jimicsiga. Markii jadwalka jadwalka tababarka, wuxuu xaqiijiyay in aan dhowr maalmood nasasho usbuucii. Maalmahan aan nasanayno waxaa muhiim ah inaanan qaadan tababarka aan qabanayno. Si kastaba ha noqotee, Nasasho micnaheedu maahan inaan jiifno maalintii oo dhan anagoo aan sameyn wax dhaqdhaqaaq jireed ah. Waa wax xiiso leh in si joogto ah loo socdo xitaa haddii ay tahay socod fudud ama orod fudud. Socodku waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee firfircoonaanta lagu sii hayn karo oo lagu sameyn karo hawlo kala duwan.
Waa inaad raadisaa nooc jimicsi jirka ah oo aan ku xirnayn jimicsi. Tani waa maxay Waxaa Ingiriisiga loogu yaqaannaa soo gaabinta NEAT. Inta lagu jiro maalmaha nasashada firfircoon, waxaan hadda sameyn karnaa howlo hoose oo xoog leh sida baaskiil wadid, socod, socod fudud, iwm. Faa'iidada dhaqdhaqaaqyadan fudud ayaa ah inay bixiyaan xoogaa faa'iidooyin ah. Hawlahan iftiinka ah waxaan awoodi doonaa inaan kordhino socodka dhiigga isla markaana siinno oksijiin muruqyada oo xiriir dhow la yeelan doona waxaan sameyneyno. Sidaa darteed, waxaan horumarin doonnaa soo kabashada muruqyada waxaanna si fiican ugu qaban karnaa kal-fadhiyada tababarka ee soo socda.
Haddii ay jiraan waqtiyo aad dareento daal ama daciifnimo xagga tababarka ah, tixgeli inaad yareyso tababarkaaga soo noqnoqda ama xooggaaga. Sida nasasho firfircoon sidoo kale waa Wicitaano ayuu marar badan wacaa. Xaqiiqdii waligaa ma aragtay usbuuc barnaamij tababar oo loo yaqaan usbuuc unload. Toddobaadkan gudihiisa, tirada maxaabiista ee aan mashiinnada saarno waa la dhimay, inta jeer ee tababarka ama xoogga aan ku tababbaraynaa waa la dhimay. Waa mid ka mid ah hababka loo helo nasasho firfircoon.
Taasi waa, kaliya xaqiiqda ka shaqeynta xoogga hoose ee nasashada firfircoon ee aan siinayno jirka. Faa'iidada ay usbuuca rarka u leedahay marka loo eego wadarta nasashada ayaa ah inaan sii wadno soo saarista la qabsiga jirka qaarkood. Tani waxay naga caawin doontaa inaan horumarino oo aan hagaajino faa'iidada waxa aan qabaneyno.
Faa'iidooyinka nasashada firfircoon
Marka aan sameyno waxqabad xoogan oo aan ku soo bandhigeyno muruqyadeena, waa inaanan ilaawin inaan sidoo kale u adeegsaneyno jilicsanaanta iyo jilibyada inay shaqeeyaan. Kuwani ka ciyaaraan door aasaasi ah qorista muruqyada muruqyada iyo waxqabadka jimicsiga. Markaan dhaqaaq sameyno waa inaan xisaabta ku darsanaa in muruqyada oo keliya aysan muhiim ahayn. Thanks to nidaamka dareemayaasha, waxaan ognahay sida loo hagaajiyo dhaqdhaqaaqa si qorista muruqyada muruqyada loo sameeyo habka ugu hufan ee suurtogalka ah. Iyadoo la hagaajinayo la qabsiga jimicsiga ayaa loo sameeyay si loo hagaajiyo awoodda miisaanka kor loogu qaado.
Markaan aragno horumar dhanka jimicsiga ah, kaliya maahan xaqiiqda inaan sii xoogeysaneyno. Marka la soo koobo, waxaan noqoneynaa mid karti badan. Tani waxay ka dhigan tahay inaan ka hawl kar nahay marka ay timaado fulinta dhaqdhaqaaqyo kala duwan. Sidaa darteed, awooddan lagu hagaajinayo farsamada jimicsiga qaarkood iyo noqoshada mid wax ku ool ah waxaa loo helaa si aad ufiican nasashada firfircoon.
Tani waxay noo horseedaysaa gunaanadka in nasashada firfircoon ay waxtar badan u leedahay muruqyada, muruqyada iyo soo kabashada xididdada. Sababtaas awgeed, waa muhiim waqti ka waqti in barnaamij lagu soo dejiyo qaar ka mid ah barnaamijyada tababarka. Waxay naga caawin doontaa inaan si wanaagsan u xoojino natiijooyinka aan helno inta lagu jiro tababarka. Sidoo kale waa in maskaxda lagu hayaa in kahor qorshaynta firfircoonidaada naftaada kaligeed, ay fiican tahay inaad waydiiso xirfadle. Waxaa jira waqtiyo marka ugu fiican tahay in aan la joojin tababarka si looga fogaado yareynta qasaaraha waxqabadka. Waana in barnaamijka nasashada oo si liidata loo fuliyay uu kaa dhigi karo dakhli yar.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan nasashada firfircoon ee faa'iidooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Nasasho firfircoon
Qalabka guryaha casriga ah